Real Madrid oo noqotay Saddexaad ee Tirada Ugu Badan Ku Guuleysata Uefa Super Cup
HomeChampions LeagueReal Madrid oo noqotay Saddexaad ee Tirada Ugu Badan Ku Guuleysata Uefa Super Cup
08/08/2017 Abdiwahab Ahmed
Waxay ahayd tani tii uu u jeeday Jose Mourinho markuu ka hadlayay faraqa u dhexeeya labada horyaal ee Champions League iyo Europa League.
Farqiga u dhexeeya kooxda ugu fiican qaarada iyo isku dayayay inuu talaabadaas ku dhawaado. Faraqa wakhti xaadirkan u dhexeeya, Real Madrid iyo Manchester United.
Kooxdiisii hore waxay u qalantay inay noqoto kooxdii ugu horeysay ee laba jeer ku guuleysata koobka UEFA Super Cups mudo 27 sanadood ah.
Manchester United ayaa waxaa u awood sheegatay kooxda reer Spain – horyaalnimada Yurubna haysata ee Real Madrid taas oo kaga guuleysatay si qurux badan koobka Uefa Super Cup oo ciyaar ay ku kala qaadayeen ku dhex martay magaalada Skopje ee wadanka Macedonia.
Madrid waxay ahayd tan gacanta sare leh bilowgii ciyaartaba, waxaanay ahayd kooxda u qalmaysay guusha, iyadoo hogaanka ku qabatay kubad qurux badan oo uu u dhaliyey Casemiro – laakiin u muuqday inuu offside ku dhex jiray.
Waxay awooda ciyaarta sii laban laabeen markii uu si fudud difaaca uga dhex dusay Isco kadib kubad ay isku soo dhiib-dhiibteen isaga iyo Gareth Bale, ciyaartan uu intii badnayd dibada ka daawanayay xiddiga Cristiano Ronaldo.
Ciyaaryahanka £75m ku jooga United – Romelu Lukaku ayaa ku celiyey oo shabaqa ku xareeyey kubad uu goolwaduhu soo tufay oo uu ku ganay Marcus Rashford.
United way ku guuldaraysatay inay fursado badan abuurto halka Madrid ay khasaarisay kubado gool loo fishay, ciyaartan Real Madrid ku noqotay kooxda kaliya ee ku ceshata Super Cup ka tan iyo 1990 kii.
Heerkulka sareeya ee qiyaastii gaadhayay 30C ee caasimada wadanka Macedonian ee ciyaartu ka dhacaysay, ayaa sababtay in kulanka dhexdiisa loo ogolaado laba jeer oo nasasho gaaban ama biyo cabid ah ciyaaryahanada labada naadi.
Khilaaf Xoogan Iyo Ismaan-dhaaf Lacageed Oo Soo Kala Dhex Gallay Wasiirka Ciyaaraha Iyo Agaasimihiisa Guud
Messi, Giroud & Dhamaan Xiddigaha Ka Maqan Champions League Toddobaadkan
Barcelona Oo Laga Reebay Champions League + Damaashaadkii Atletico Madrid